चालकहरुले पढ्नैपर्नेः राति १२ देखि बिहान ५ बजेभित्रै किन हुन्छ बढी दुर्घटना ? यस्तो छन् सात कारण | Rajmarga
चालकहरुले पढ्नैपर्नेः राति १२ देखि बिहान ५ बजेभित्रै किन हुन्छ बढी दुर्घटना ? यस्तो छन् सात कारण
रातमा खाली सडक हुने भएकाले आमरुपमा मानिसहरु गाडी तिब्र गतिमा चलाउने गर्दछन् । १०० को स्पीडमा ५ सेकेन्ड निद्राले झिमिक्क पार्दा गाडीले १७५ किलोमिटरको दूरी तय गरिसकेको हुन्छ ।
अँधेरोका कारण आँखामा जोड पर्दछ । त्यसै पनि निद्राको पहिलो संकेत गाडीको पोजिसनबाट प्राप्त हुन्छ । थाकेको चालकले आमरुपमा गाडी एउटै लेनमा चलाउन सक्दैन । उ कहिलो बाँया त कतिले दायाँ जान लाग्दछ।
Previous post: कस्तो होला नायक नायिकासँगै -याम्पमा डेढ दर्जन मोडलको क्याटवाक ?
Next post: वडाध्यक्ष पौडेलको घरमा बम विष्फोट, दुई घाइते
प्रधानमन्त्री भन्छन: जनताको विश्वास र भरोसामा तलमाथि हुन्न
अमेरिकालाई उत्तर कोरियाले फेरि दियो यस्तो चेतावनी